Mee na Emela nke Shakekọrịta vidiyo YouTube maka azụmahịa gị - SoNuker
YouTube nwere ike ịbụ ngwa dị ike maka iwulite ma bulie akara azụmaahịa gị. Nwere ike iji webụsaịtị ịkesa vidiyo iji kwalite azụmaahịa azụmaahịa dijitalụ azụmaahịa gị n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe. Edemede a nyere gị ihe dị mfe ma dị irè nke ịme na ịghara ịkekọrịta vidiyo azụmaahịa azụmaahịa gị na YouTube.
Nye ọdịnaya dị ọhụrụ na nke bara uru kwa oge. Nyochaa ebe mmasị ndị na-ege gị ntị nwere, ma nye ha ọdịnaya dabere na mmasị ndị a.
Tinye ajụjụ ọnụ, webinars na nzaghachi vidiyo nke na-enyere aka ịmepụta akara gị dịka ọkachamara n'okwu gbasara ụlọ ọrụ gị. O yikarịrị ka ndị mmadụ hà ga-achọ ụlọ ọrụ YT nke ika gị mgbe ị mere nke a.
Jiri ma jikọta okwu na vidiyo gị. Edere ederede YouTube maka isiokwu, dịka ọdịnaya ederede ọ bụla ọzọ dị n'ịntanetị. Wantchọrọ inwe ike iji ma tinye Keywords n'ime vidiyo YT gị, iji melite SEO ya na ọhụhụ.
Tinye ọkọlọtọ, thumbnails, ọwa ụgbọala na-adọkpụ na ihe ndị ọzọ mara mma na-ahụ anya n'ime vidiyo YT gị. Ọ ga - enyere aka idobe ndị ọbịa na ọwa gị ma wuo njirimara gị.
Tinye njikọ njikọ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị n'ime vidiyo YouTube gị. Ọ ga-azọpụta ndị na-ege gị ntị YT nsogbu nke ịchọ ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa gị iche.
Họpụta ọdịnaya vidiyo gị na listi ọkpụkpọ. Ọ ga - edobe vidiyo YT gị ma nyere ndị ahịa gị aka ịchọta vidiyo ha na - achọ ngwa ngwa.
Lelee nyocha YT gị. Wantchọrọ ịgbaso arụmọrụ nke ọdịnaya vidiyo nke ịkekọrịta na azụmahịa YT peeji nke gị, yabụ na ị maara etu esi achịkwa usoro ọdịnaya vidiyo YT gị iji bulie nsonaazụ ahịa vidiyo gị.
Adaberela na ọnụ ọgụgụ ndị na - ekiri ya dị ka naanị metrik iji chọpụta ihe ịga nke ọma vidiyo vidiyo gị YT. Ọnụ ọgụgụ nke ihe ị na-enweta na vidiyo gị na ọnụ ọgụgụ nke ndị debanyere aha na ọwa YT gị bụ ihe ngosi dị mkpa nke ezigbo arụmọrụ.
Agbalịla mgbe niile ịza nje. Ee, vidiyo vidiyo ga - enyere gị aka ịchọpụta vidiyo gị ka ọ dị mfe ma bulie okporo ụzọ ndị ọbịa na ibe weebụ gị dị iche iche, mana nke a apụtaghị na ị kwesịrị ịnwa ịme vidiyo vidiyo ọ bụla ị mepụtara ga - “malitere ịrịa”.
Emela vidiyo YouTube na-enweghị atụmatụ ọdịnaya ya. Nyocha, mee atụmatụ ma mepụta vidiyo vidiyo YT gị maka nsonaazụ kacha mma.
Edebela vidiyo mara mma. Ndị na-ege gị ntị agaghị achọ ịga n'ihu na-ele obere vidiyo dị obere, vidiyo na-adịghị mma ọ bụrụgodi na ha pịrị ya. Vidio ahia ị na-emepụta maka ọwa ahịa azụmaahịa gị na YT na-emetụta nghọta gị.
Edozie nsonaazụ vidiyo vidio YouTube site na ewu ewu. Hazi vidiyo ndị kachasị emetụta n'elu nwere ike iyi ka ụzọ kachasị mma maka ịhazi vidiyo gị, mana ịhazi ọdịnaya vidiyo gị dabere na mmasị ndị na-ege ntị ga-abụ ụzọ dị irè karị.
Mee otutu ihe n’ime ahia ahia YouTube gi
E wezụga ime na ihe ndị a edepụtara n'elu, ị nwekwara ike ịdebanye aha maka Akaụntụ Azụmaahịa na YouTube tupu ịmalite mmemme mgbatị ahịa YouTube. I nwekwara ike isonye na nnwale na ihe ndị ọzọ na-esiwanye ike ahịa YouTube, dị ka itinye aka na influencer. Jiri akụkọ YouTube, nweta ndị okike na-enweghị ihe ịga nke ọma na ụgbọ mmiri, na ndị ọzọ. N'oge na-adịghị anya, ị ga-achọpụta na vidiyo ịre ahịa YouTube na-agbatị gị KPI ndị ị tụrụ anya ya. Marketingzụ ahịa vidiyo dị n'etiti ngwa ahịa ahịa kacha elu-ROI dị maka azụmahịa ọ bụla taa, ọ ga-abụkwa nzuzu ịhapụ ya site na atụmatụ ịre ahịa dijitalụ gị. Kedu ihe ị na-eche? Gbalịa mee ihe ndị a na-achọghị ịme ahịa YouTube taa.
Ihe kpatara echiche ji emetụta ihe ọ bụla savvy marketer na-enyere YouTube maka ịre vidiyo vidiyo ga-amata mkpa ọ dị inweta echiche. Ha na-agbasi mbọ ike inweta ihe ngosi YouTube n'ihi na ndị a abụghị naanị ọnụ ọgụgụ mana ha bụ ihe nnọchianya dị mkpa…